#update #အစ်ကိုရေ #အရေးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါ သည် #WORKER #Collective #Boycott | democracy for burma
#update #အစ်ကိုရေ #အရေးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါ သည် #WORKER #Collective #Boycott
tags: ဆက်သွယ်ရန် - 09799762520, အစ်ကိုရေ အရေးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါ သည်, Burma, Costec Garment, Ford Glory Garment, Han Jen Textile & Garment, Labour rights, Land Myanmar Garment, Myanmar, Naing Zaw, RED STONE GARMENT, Shwe Pyi Tha Industry Zone, Worker Collective Boycott, worker strike
(5-2-2015)နေ့RED FTONE စက်ရုံရဲ ညိုနှိုင်းမှု အခြေနေပါ အလုပ်သမားတွေ က အခြေခံ(30000)ရှားပါးစရှိတ် (20000)တောင်းဆိုသော်လဲ အလုပ်ရှင်မှ အခြေခံ(20000)ရှားပါးစရှိတ်ကို(10000ပဲပေးမည်ဟု ပြောဆိုမူအပေါ်ပြေလည်မှုရရှိခြင်းမရှိ
# Red Stone Worker #
* WORKER COLLECTIVE STATEMENT *
1, E,LAND MYANMAR GARMENT WORKER,
2, COSTEC INTERNATIONAL Co,Ltd(Garment) WORKER,
3, HAN JEN TEXTILE & GARMENT WORKER,
4, FORD GLORY GARMENT WORKER,
5, RED STONE GARMENT WORKER,
Phone : 09799762520, 09420214753, 09250051100, 09428048727, 0932139659
* Emergency News *
### Worker Collective Boycott ###
# E,Land Myanmar အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားများ၊
# COSTEC အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားများ၊
# Ford Glory အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားများ၊
# Red Stone အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားများ၊
# Han Jen အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ…….
မှတ်ချက် – အချက်အလက်ပြည့်စုံသည့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုကို တရားဝင်အသိပေး
ဆက်သွယ်ရန် – 09799762520, 0932139659, 09428048727,09975441601, 09420214753, 09250051100
At The Shwe Pyi Tha Industry Zone, Yangon.
COSTEC International Co.,Ltd (Garment) Photo….#
Phone – 0932139659
At the Industry Zone(3), Insein Township.
1~Ford Glory Garment Worker Strike,
2~Han Jen Textile & Garment Worker Strike,
3~Costec Garment Worker Strike,
4~E, Land Myanmar Garment Worker Strike.
# RED STONE GARMENT WORKER STRIKE#
Shwe Pyi Tha Industry Zone(2)
*Fifth Worker Strike*
*We hope Worker Collective Strike.*
At the Shwe Pyi Tha Industry Zone. cr.Naing Zaw
← #myanmar #burma #white #card #holders #right #to #vote #Bengali
#Eleven#Media #strongly #denounces giving the #right to #vote to the #temporary #citizenship #card (so called White Card) holders →